बाइबलका कथाहरू: दमीशक जाने बाटो - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
भुइँमा लडिरहेको यो मान्छेलाई तिमी चिन्छौ? ऊ शावल हो नि। तिमीलाई याद छ, स्तिफनसलाई ढुंगा हिर्काउने मान्छेहरूको लुगा कुरेर बस्ने मान्छे ऊ त हो नि। उसको वरिपरि कस्तो उज्यालो छ हेर त! यो के भएको होला?
स्तिफनस मरेपछि शावलले येशूका चेलाहरूलाई खोजी-खोजी दुःख दिन थाल्छ। ऊ घर-घर पसेर चेलाहरूलाई घिसार्दै जेलमा हाल्न थाल्छ। त्यसपछि, थुप्रै चेलाहरू भागेर अरू सहरमा जान्छन् र त्यहीं “सुसमाचार” प्रचार गर्न थाल्छन्। त्यसकारण, शावल येशूका चेलाहरू खोज्न अरू सहरमा जान्छ। अहिले ऊ दमीशकतिर जाँदैछ। तर बाटोमा हिंडिरहेको बेला अचम्मको घटना हुन्छ।
अचानक आकाशबाट शावलको वरिपरि ज्योति चम्कन्छ। अनि तिमीले चित्रमा देखेझैं, उज्यालो हेर्न नसकेर शावल भुइँमा पछारिन्छ। अनि ऊ भुइँमा लडिरहेको बेला यस्तो आवाज आउँछ: ‘हे शावल, हे शावल! तिमी मलाई किन दुःख दिन्छौ?’ शावलसँग जाने मान्छेहरूले पनि त्यो ज्योति देख्छन् र आवाज पनि सुन्छन् तर के भनेको बुझ्नचाहिं बुझ्दैनन्।
‘प्रभु, तपाईं को हुनुहुन्छ?’ शावलले सोध्छ।
अनि फेरि यस्तो आवाज सुनिन्छ: ‘म येशू हुँ जसलाई तिमी दुःख दिइरहेछौ।’ येशूले किन यसो भन्नुभएको होला? किनकि शावलले येशूका चेलाहरूलाई दिएको दुःखलाई येशूले आफैलाई दिएको दुःख ठान्नुहुन्छ!
शावलले अब सोध्छ: ‘प्रभु, अब म के गरूँ?’
येशू यसो भन्नुहुन्छ: ‘उठ र दमीशक जाऊ। तिमीले के गर्नुपर्छ, त्यो तिमीलाई त्यहीं बताइनेछ।’ त्यसपछि उठेर आफ्नो आँखा खोल्दा शावलले केही देख्नै सक्दैन। ऊ अन्धो पो हुन्छ! उसँगै आएका अरू मान्छेहरूले उसको हात समातेर उसलाई दमीशक लैजान्छन्।
येशूले त्यसपछि दमीशकमा बस्ने आफ्नो एक जना चेलालाई यसो भन्नुहुन्छ: ‘हननिया, उठ। सीधा भन्ने बाटोमा जाऊ। त्यहाँ यहूदाको घरमा शावल नाउँ गरेको मान्छेलाई खोज। मैले उसलाई आफ्नो विशेष सेवक बनाउन छानेको छु।’
हननियाले त्यसै गर्छ। शावललाई भेटेपछि हननियाले शावलमाथि आफ्नो हात राख्छ र भन्छ: ‘तिमीले फेरि देख्न सकोस् अनि तिमीले पनि पवित्र आत्मा पाओस् भनेर प्रभुले मलाई तिमीकहाँ पठाउनुभएको हो।’ तुरुन्तै चिप्रा जस्तो कुन्नि के हो शावलको आँखाबाट खस्छ र उसले फेरि देख्न थाल्छ।
त्यसपछि शावलले कस्सिएर धेरै ठाउँका मान्छेहरूलाई प्रचार गर्छ। ऊ पछि प्रेरित पावल बन्छ। उसको विषयमा पनि हामी धेरै कुरा सिक्नेछौं। तर त्योभन्दा पहिले परमेश्वरले पत्रुसलाई के गर्न पठाउनुहुन्छ, त्यो थाह लगाऔं।
प्रेरित ८:१-४; ९:१-२०; २२:६-१६; २६:८-२०.
स्तिफनस मरिसकेपछि शाऊलले के गर्छ?
दमीशक जाने बाटोमा कस्तो अचम्मको घटना हुन्छ?
येशूले शाऊललाई के गर्न अह्राउनुहुन्छ?
येशूले हननियालाई कस्तो निर्देशन दिनुहुन्छ? शाऊलले फेरि कसरी आँखा देख्न थाल्छ?
पछि शाऊल कुन नाउँद्वारा परिचित हुन्छ? उसले के गर्न सुरु गर्छ?
प्रेरित ८:१-४ पढ्नुहोस्।
भर्खरै स्थापित मसीही मण्डलीमाथि आएको सतावटले कसरी मसीही धर्म फैलाउन मदत गर्छ? आधुनिक समयमा पनि कसरी त्यस्तै घटना भएका छन्? (प्रेरि. ८:४; यशै. ५४:१७)
प्रेरित ९:१-२० पढ्नुहोस्।
शाऊलको लागि साँचेर राख्नुभएको कुन तीन पक्षीय कामबारे येशूले बताउनुभयो? (प्रेरि. ९:१५; १३:५; २६:१; २७:२४; रोमी ११:१३)
प्रेरित २२:६-१६ पढ्नुहोस्।
हामी कसरी हननिया जस्तै हुन सक्छौं र यस्तै हुनु किन महत्त्वपूर्ण छ? (प्रेरि. २२:१२; १ तिमो. ३:७; १ पत्रु. १:१४-१६; २:१२)
प्रेरित २६:८-२० पढ्नुहोस्।
शाऊलले मसीहीधर्म अंगालेको घटना आज बेग्लै धर्म मान्ने पति वा पत्नी हुने मसीहीहरूका लागि किन प्रोत्साहनदायी छ? (प्रेरि. २६:११; १ तिमो. १:१४-१६; २ तिमो. ४:२; १ पत्रु. ३:१-३)